एन.ओ.सी. प्रकरण सम्बन्धमा फेकनको ज्ञापनपत्र र नेकाको धारणा यस्तो छ । – Akhabar Post : Daily Online News From Nepal
उच्च-शिक्षाका लागि बिदेस अध्ययन, जसमा पनि अस्ट्रेलिया र जापान संबधमा बजारमा बिभिद किसिमका चर्चा बेला-बेला आउने गरका छन् । यसै गरि पछिल्लो समयमा एन.ओ.सी. प्रकरण चर्चाको चुलीमा छ।
विदेशमा अध्ययनका लागि नेपालबाट विविध प्रक्रियाहरु पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । जस मध्ये नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रमाणीकरण शाखाले हरेक विद्यार्थीलाई एन.ओ.सी. आर्थात “नो अब्जेक्सन लेटर” दिने एउटा प्रक्रिया छ ।
यहि विषय माथि केन्द्रित रहेर अहिले बजार तातेको छ । प्रमाणीकरण साखाको अन्योलातापुर्ण एक सूचना यसको मुख्य धोतक बनेको देखिन्छ । जसमा, यहि जेठ २८ गतेबाट विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरु मध्ये ब्रिजकोर्ष, भासा तथा डिप्लोमा मात्र अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई एन.ओ.सी. नदिने भनिएको छ ।
कानुनतः प्रमाणीकरण शाखाले उच्च शिक्षाका लागि विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुका लागि मात्र एन.ओ.सी. दिने प्रावधान रहेको छ । तसर्थ माध्यामिक तह, कक्षा १२ आर्थात बोलीचालीको भासामा (+2) पास गरेपछि उच्च-शिक्षा आर्थात स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसन्धान र पी.एच.डी. लगायतको तहको अध्ययनमा जानेलाई मात्र एन.ओ.सी. प्राप्त हुन्छ । तर उच्च-शिक्षाका लागि बिदेसमा रहेका विश्वबिध्यालयमा एप्लाई गरेपश्चात विद्यार्थीलाई सपोर्टको रुपमा भाषा तथा अन्य ब्रिजकोर्स आवस्यक पर्ने देखिएमा एन.ओ.सी. उपलब्ध हुन्छ । जसमा विद्यार्थीहरुले आफुले पढ्न चाहेको विश्वबिध्यालयबाट ब्रिजकोर्सको आवस्यकता सम्बन्धि सिफारिस पत्र भने उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।
बजारमा देखिएको यो अन्यौलतालाई चिर्नका निम्ति शैक्षिक परामर्शदाताहरुको एक छाता संगठन फेकन आर्थात स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपालले, ‘नेपाल सरकार’ शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रलाय अन्तर्गतको प्रमाणीकरण साखामा ज्ञापन पत्र बुझायो । ज्ञापन पत्र बुझाउन संघका अध्यक्ष युवराज कटवालको टोलि एन.ओ.सी. शाखाका प्रमुख महेश्वर शर्माको कार्यकक्ष केशरमहल पुगेको थियो।
शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बिना कुनै सोच बिचार मुलभूत रुपमा चिन, जापान र अस्ट्रेलिया लगायतका गन्तव्यहरु जहाँ भाषा तथा डिप्लोमा कोर्षहरु मुख्य रुपमा पढाइ हुने ठाउँहरुलाई नै तरो बनाएर कक्षा ११ र १२ नै डिप्लोमा हो भन्ने ढंगले सूचना निकालेको र यसलाई सच्चाउनु पर्ने सरोकारवालाहरु बताउछन् ।
त्यति मात्र होइन विश्वका लगभग सबै देशहरुमा कक्षा १२ सम्मको तहलाई विद्यालय शिक्षा मानिन्छ । त्यसकारण डिपेन्डेन्सि बाहेक कक्षा १२ पास नगरिकन तथा सम्बन्धि मुलुकले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरिकन अध्ययनको लागि कुनै पनि बिद्यार्थी बिदेश पढ्न जान नपाउने ब्यबस्था साबैतिर रही आएको छ ।
यसै विषय उपर प्रस्तुत छ अखबार पोस्ट सम्बाददाता सगको कुराकानीमा परामर्शदाताहरुको एक छाता संगठन नेका अर्थात “राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ” का संयोजक सन्तोष प्याकुरेलले राखेको आफ्नो बिचारमा आधारित केहि अंस:
उज्ज्वल शैक्षिक भविष्यका निमित्त बिदेसमा गएर भाषा र अन्य ब्रिज कोर्सका विषयहरु अध्ययन गर्ने र भबिस्यमा पढ्ने विश्वविद्यालयको टुङ्गो भने पछि गर्ने (अहिले नगर्ने) अधिकार एक विद्यार्थीलाई हुन्छ कि हुदैन ?
नेपालमा मात्रै एउटा उद्देश्यका लागि शुरु गरिएको एन.ओ.सी. प्रक्रिया अहिले आएर विद्यार्थी बाहिर पढ्न नजाऊन् भनेर रोक्ने ‘टुल’ पो बन्न लागेको हो कि भन्ने आशंका विद्यार्थी, तिनका आमाबुवा र सबै सरोकारवालाहरूमा पर्न जाँदै छ।
सरकारलेनै बिध्यर्थिहरुलाई डिप्लोमा पढ्न जान दिन्न, भाषा पढ्न जान दिन्न, विश्वविद्यालय नै जाउ भन्नु छनोटको सुविधाबाट वञ्चित गरिएको मात्र नभई एउटा निश्चित वर्गलाई वैदेशिक शिक्षाको अवसरबाट विमुख गर्न खोजिएको भन्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी, यसै विषय उपर प्रस्तुत छ फेकन आर्थात “स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल” का अध्यक्ष युवराज कटवालले राखेको आफ्नो बिचारमा आधारित एक अंस:
माध्यमित तह आर्थात विद्यालय शिक्षा भनेको कक्षा १२ सम्ममको शिक्षा हो । कक्षा १२ उत्रिण नगरेका बिद्यार्थीहरु अपवाद बाहेक कुनै पनि देशमा पढ्न जान नपाउने ब्यबस्था छ । यति हुदा-हुदै सूचना निकालेर परामर्शदाता, विद्यार्थी र तिनका अभिभावक तथा आम सरोकार वालाहरुलाई अनावस्यक झमेला दिने तथा त्रशित तुल्याउने काम भएको छ । जो रहस्यमय छ । जुन काम गर्नै नपर्ने हो, त्यो गरेर सरकारले गडबडी गर्न खोजेको छ । यस्तो विषयमा सरकार जवाफदेही हुन पर्छ सरकारले स्पस्ट पर्नु पर्छ । यो विषय अनुत्तरीत नै छाडिदिन खोजियो भने हामी छोड्दैनौ ।